6-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee tijaabada IQ ee loogu talagalay Android | Androidsis
Aaron Rivas | 30/04/2021 23:59 | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Noocyada xayawaanka ee meeraha Dunida, dadku waa kuwa ugu caqliga badan, uguna sarreeya dhammaan kuwa kale. Maaha wax aan waxba ka jirin oo aan "xukumeyno" oo si tartiib tartiib ah u sameyno horumar dhinacyo badan leh, ha ahaato tikniyoolajiyadda, fiisigiska, caafimaadka iyo daawada, falsafadda iyo wax kasta oo keena su'aalo aasaasi ah ama qoto dheer. Waana in awoodeena wax qabad iyo soosaarid ay tahay waxa nagu hogaaminaya, sidaa darteed markasta waxaan ku jirnaa horumar joogto ah.
Si kastaba ha noqotee, kulligeen isku caqli ma nihin, sidaa darteed waxaan leenahay heerar kala duwan iyo xawaareyaal faham iyo xallin. Tani waa ta xukunta awooddeena xallinta iyo fahamka adduunka, waxaana jira hab lagu xisaabiyo. Tan awgeed waxaan kuu keenaynaa qoraalkan, oo aad ka heli doontid 6-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee IQ ama IQ.
Imtixaannada IQ ama imtixaannada ayaa kuu sheegaya sida qof caqli u leeyahay. Marka, haddii aad xiiseyneysay inaad ogaato sida aad caqli u tahay, iskuday barnaamijyadan soo socda ee aan hoos ku taxnay. Haa runtii, dhibcaha ugu dambeysa ee mid walba ku siinayo IQ ama CI waa mid qaraabo ah oo waa in loo qaataa bartilmaameed ahaan. Kuwani waxay mas'uul ka yihiin cabbiraadda qiyamka muhiimka ah ee kala duwan si loo siiyo cabbiraad sax ah sida sababaynta, xusuusta, feejignaanta, fikirka la taaban karo iyo cabbirada garashada kale.
Waxaa jira jadwallo badan oo ka warbixiya kala duwanaanta IQ-da dadka. Kuwani waxay muujinayaan kala duwanaanta sirdoonka, haddii uu ka hooseeyo, ka sarreeyo ama dhexdhexaad yahay. Marka loo eego Woodcock - Johnson Cognitive Awilities Test, oo ah mid ka mid ah miisaanka ugu dambeeya ee IQ oo la sii daayay 2007, waxay kala yihiin sidan soo socota:
131 iyo wixii ka sareeya: hibo leh.
121 ilaa 130: aad u sarreeya.
111 ilaa 120: celcelis ahaan ka sarreeya
90 ilaa 110: celcelis ahaan.
80 ilaa 89: ka hooseeya celceliska
70 ilaa 79: hooseeya.
69 iyo hoose: aad u hooseeya.
Barnaamijyada soo socda ee IQ iyo ciyaaraha ayaa kaa caawin doona inaad ogaato halka aad joogto.
1 Imtixaanka IQ Bilaashka ah
2 Imtixaanka ugu fiican ee IQ
3 Tijaabada maskaxda
4 Imtixaanka IQ
5 Imtixaanka Aqoonta iyo Aqoonta
6 Imtixaanka IQ - Waa Bilaash Dhammaan
Imtixaanka IQ Bilaashka ah
Si loo helo isku-dubbaridkan bilow wanaagsan, waxaan keenay Imtixaanka IQ, waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad ku xisaabiso heerkaaga IQ imtixaanno badan. Tani waxay ku saleysan tahay imtixaanka 'IQ Raven', mid ka mid ah kuwa ugu caansan, marka lagu daro baaritaanka aan kor ku soo sheegnay ee Woodcock - Johnson Cognitive Skills Test.
Imtixaanada iyo qiimeynta codsigani bixiyo waxaa loogu talagalay dadka jinsi kasta ha ahaadee, waxbarashadooda, waxqabadkooda iyo shaqadooda, iyo fasalka dhaqaalaha iyo bulshada. Ma takoorto iyo wuxuu si sax ah ugu xisaabiyaa heerka garaadka, sababaynta, fikirka la taaban karo, xusuusta, hal-abuurnimada iyo hal-abuurka, iyo heerarka kale.
Waxay leedahay baaritaanno badan oo ay tahay inaad sida ugu dhaqsaha badan u sameyso. Qaarkood waxay noqon karaan kuwo aad u dhib badan, halka kuwa kale ay u muuqdaan kuwo aad u fudud in la xaliyo. Fikradda ayaa ah inaad isku daydo inaad hesho jawaabta saxda ah waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
Su'aasha, waxaa jira 60 sawir oo loo qaybiyay 5 kooxood, halkaas oo aad u baahan tahay inaad raadiso qaab oo aad doorato sawirka maqan. Dhamaadka imtixaanka IQ, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato sida aad caqli u leedahay.
Developer: imtixaanka iq
Imtixaanka ugu fiican ee IQ
Haddii aad rabto inaad baashaal sameyso intaad tijaabinayso awooddaada maskaxeed si aad u xalliso dhibaatooyinka una ogaato sida xariifnimada iyo xariifnimada leh ee aad u leedahay, Imtixaanka ugu Fiican ee IQ waa barnaamij ku habboon iyo ciyaar adiga kugu habboon. Waana tan tan ku imaanaysa xujooyin badan iyo halxidhaalayaal aad u baahan tahay inaad xal u hesho, laakiin ha aaminin naftaada, waxaa jira qaar runtii kaa dhigi doona inaad wax badan ka fikirto, maxaa yeelay ma sahlana.
Waxaa jira xujooyin badan oo caqabad weyn ku noqon doona caqligaaga, iyo waxa ugu dambeeya, horeyba markii aad wax walba xallisay, waxaad ka heli kartaa fikrad heerka IQ aad ku faanto.
Si aan fikrad kuu siiyo, heerka koowaad ee ciyaarta waxaa xallin kara oo keliya 90% dadweynaha, halka heerka ugu dambeeya uu yahay mid aad u adag oo 5% kaliya ay awoodaan inay xalliyaan. Waana taas heer kasta dhibku si tartiib tartiib ah ayuu usii kordhaa.
Waxaa jira 60 xujooyin, 5 heerar dhib ah oo kala duwanaan kara, in kabadan 100 talooyin si ay kuu caawiyaan, iyo tirakoob faahfaahsan. Waa ciyaar sifiican u buuxisa doorka mitirka tijaabada IQ.
Si aanad ugu xannibmin heer kasta, waxaad halhayn kasta u haysaa laba tilmaam, si aad si dhakhso leh u xallin karto.
Developer: cayaaraha kediska
Malaha, Kani waa mid ka mid ah codsiyada IQ-ga ee ugu dhameystiran ee aad hadda ka heli karto Play Store-ka Android. Iyo, ka sokoow inaad haysato imtixaano cabbiraya caqligaaga, waxay la timid imtixaanno dheeri ah oo kaa caawin kara inaad si fiican isu barato.
Mid ka mid ah kuwan ayaa kaa caawinaya inaad qiimeyso xaaladdaada maskaxeed iyo inaad go'aamiso xaaladda nafsiyeed ee aad ku jirto iyo fikirka caqliga ku dhisan.
Weligaa ma istaagtay inaad ka fikirto qofka aad tahay, nooca shaqsiyad ee lagu yaqaan ee dadku u fahmi waayaan? Weligaa ma is weydiisay inaad leedahay hibo qarsoon ama karti? Ama, dhanka kale, waa maxay xirfadaha aad tahay ama aad ku fiicnaan karto, waa maxay dabeecaddaadu iyo maxay tahay caqligaaga fikirka? Hagaag, waa hagaag, barnaamijkani wuxuu kugu hagi doonaa adiga habka loo maro jawaabaha su'aalahan iyo kuwa kale.
Laakiin, dib ugu noqoshada waxa aadka noo xiiseeya, kuwaas oo ah imtixaannada IQ, Tijaabada Maskaxda kama baxeyso baaritaanka IQ oo kuu sheegi doona, iyadoo lagu saleynayo jawaabahaaga, sidaad caqli u leedahay, iyadoo aan loo eegin xaaladdaada, da'daada, xirfaddaada, heerka dhaqaale iyo booskaaga bulsheed. Waxay sidoo kale la socotaa imtixaanka IQ Eysenck iyo Raven IQ test, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu badan ee laga isticmaalo adduunka, labadaba wareysiyada shaqada iyo xarumaha waxbarashada iyo kuwa kale.
Dhinaca kale, Imtixaanka Maskaxda ayaa kuu oggolaanaya inaad go'aamiso diiradda dareenkaaga iyo feejignaantaada, jiritaanka niyad jab iyo niyad jab iyo sida aad ugu qanacsan tahay noloshaada. Waa, shaki la'aan, mid ka mid ah barnaamijyada tijaabada IQ ee ugu dhammaystiran - iyo faahfaahinta kale ee caafimaadka iyo xaaladda - qaybteeda.
Imtixaanka aqoonta Tijaabada qofka
Imtixaanka IQ waa codsi kale oo weyn oo Android ah oo kaa caawinaya inaad ku go'aamiso heerkaaga sirdoonka qaab wax ku ool ah oo leh tijaabada fikirka aan la taaban karin ee fekerka Raven. Imtixaanadeeda badan, go'aamiso garaadkaaga suugaaneed (Gf), sababaynta awoodda iyo awoodda aad ku xallin karto dhibaatooyinka si aan macquul ahayn oo macquul ah.
Halkan waxaad ku wajihi doontaa 60 su'aalood, kuwaas oo tijaabin doona garaadkaaga, kaas oo aad ku awoodi doontid inaad ku ogaatid sida cilmiga iyo garashada leh aad u tahay; waa inaad doorataa qaabab joomatari ahaan jawaabo munaasabad kasta. Heerka dhibaatada kuwani way sii kordhayaan marba marka ka dambaysa, markaa marka hore qaar waxay kula noqon karaan wax fudud adiga, halka kuwa kalena laga yaabo inayan fahmin. Si la mid ah, ku dheji niyadda oo isku day inaad hesho jawaabaha saxda ah. Dhibcaha darajada ugu dambeysa ee aad haysato, ayaa kaa caqli badan. Isla mar ahaantaana, waxay u adeegi doontaa inaad ku madadaasho oo maskaxdaada iyo dareenkaaga u shaqeyso.
Dabcan, waxaa habboon in maanka lagu hayo waxyaabaha soo socda: tijaabinta barnaamijkan - iyo kuwii ka horreeyay ee la taxay - waxay kaliya xisaabinaysaa qayb ka mid ah awoodaha aqooneed ee qofka. Adiga oo maskaxda ku haya tan, ma soo saari kartid gunaanad sax ah oo sax ah oo ku saabsan garaadka guud ee qofka. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo natiijooyinku yihiin qiyaaso iska caadi ah, gabagabada kama dambaysta ah waa mid aad u sax ah, taas oo ah sababta IQ Imtixaanku u yahay barnaamij kale oo weyn oo lagu xisaabiyo heerkaaga IQ.
Imtixaanka Aqoonta iyo Aqoonta
Tijaabadan akhlaaqda ama arjiga IQ ayaa sidoo kale lagu gaarayaa hadafka aad raadineyso, oo ah inaad ogaato sida caqliga badan, xariifnimada iyo xariifnimada badan ee aad u leedahay xalinta dhibaatooyinka, iyada oo ku saleysan awoodaada caqli gal iyo caqli gal ah iyo fikirka aan la taaban karin.
Imtixaanada iyo su’aalaha uu qaadaa waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee laga hirgaliyo dhinacyo iyo aagag kala duwan oo lagu aqbalo shaqooyinka iyo goobaha waxbarashada iyo tacliinta sare sida jaamacadaha iyo teknolojiyadda. Su'aalaha aad halkaan ka helayso ma aha kuwo afka laga sheego oo waxaa lagu kala saaraa imtixaanno macquul ah, baaxad ahaan iyo tiro ahaanba, kuwaas oo si dhammaystiran loo qiimeeyo garaadka iyo sababaynta mawduuca.
Codsigan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu jimicsado maskaxda. Sidoo kale, mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan waa inaysan u baahnayn xiriir internet ah, sidaa darteed waad u isticmaali kartaa wakhti kasta, meel kasta.
Imtixaanka IQ - Waa Bilaash Dhammaan
Si loo dhammeeyo isku-dubbaridkan 7-da barnaamij ee ugu wanaagsan IQ ee loogu talagalay taleefannada casriga ah ee 'Android', waxaan kuu soo bandhigeynaa IQ Imtixaanka - Bilaash Dhammaan, barnaamij kale oo weyn oo ka tirsan qaybtiisa si loo cabbiro heerka garaadka, sababaynta, fikirka caqliga iyo caqliga, iyo awooda xalinta dhibaatooyinka aasaasiga ah iyo kuwa kakan.
Iyada oo lagu qiimeeyo 4.6 xiddig Google Play Store iyo in ka badan 50 oo soo degsasho ah iyo 1.500 oo faallooyin togan ah, tan ayaa u dhiganta barnaamij kale oo IQ ah oo tijaabo ah. Tan waxaa suurtagal ah in lagu ogaado laguna xisaabiyo xirfadaha xisaabta, fahamka luqadeed, xusuusta muddada-gaaban iyo xawaaraha ka shaqeynta macluumaadka.
Developer: CodeInt Intelligent
Haddii aad qoraalkan ku heshay mid xiiso leh, sidoo kale waad eegi kartaa 6-da kulan ee fikirka wanaagsan ee Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 6da barnaamij ee ugu wanaagsan ee tijaabada IQ ee loogu talagalay Android